Redရာမဈေးပေါသောလှည့်ကွက်များ၏အကူအညီဖြင့်မသင်္ကာသောစစ်တပ်ကိုဖန်သားပြင်ပေါ်သို့ယူလာပါ။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အနီရောင်ဧရာစျေးပေါတဲ့လှည့်ကွက်များ၏အကူအညီနှင့်အတူဖန်သားပြင်တွင်ဘဝကဖို့မှာတော့ဖုတ်ကောင်များ၏တပ်မတော်ကိုယူခဲ့
လက်ပံ, OR - အောက်တိုဘာလ 1, 2019 - အနီရောင်ဧရာ၏ဖန်တီးသူ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့်ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ် tools တွေနဲ့့က၎င်း၏၏တတိယအရစ်ကျဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ် Thrones သင်ခန်းစာစီးရီးစျေးပေါအကောက်အထူးထုတ်ဝေဂိမ်း။ ဒီနောက်ဆုံးပေါ်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့လှုပ်ရှားမှု Movie, ဖေဖေ, Hashi, မည်သို့အပါအဝင်Emmy®-ဆုရရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲကနေလူနေမှုနှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်အကြားပြင်းထန်သောစစ်တိုက်မြင်ကွင်းများထပ်ဖွဘယ်လိုပြသ အဆိုပါဖုတ်ကောင်အလုံးအရင်းလှုပ်ရှားပုံများ သောလူသေကွောစစ်တပ်တက်စေလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့သင်ခန်းစာလွှတ်ပေးရန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, အနီရောင်ဧရာကိုလည်းအခမဲ့အစိမ်းရောင် screen ကိုရိုက်ကူးကွာပေးခြင်းနှင့်ရှေးရှေးဒုံဧရာထုတ်ကုန်မိသားစုထံမှအားလုံး tools တွေအနိုင်ရမယ့်အခွင့်အလမ်းပေးမယ့်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပါလိမ့်မည်။
အခုတော့ Watch: တစ်ဦးကဖုတ်ကောင် Horde တိုက်ပွဲရှုခင်း Create - Thrones VFX အပိုင်း3၏ဂိမ်း
"ဒီမြေတပြင်လုံးအမှတ်တစ်ဦးအပြည့်အဝ CG ဇာတ်ကောင်တိုက်ခိုက်ခြင်းအဲဒါကိုနှင့်ဆက်စပ်အချို့အေးမြဇာတ်ကောင်သက်ရောက်မှုများနှင့်အမှုအရာလေရဲ့ပင်အခါ, တစ်ဦးကြီးတွေသဘောတူညီချက်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်တော်မမူကြောင်းသင်ပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Hashi သည့်သင်ခန်းစာအတွက်ကပြောပါတယ်။
အနီရောင်ဧရာ VFX Suite ရှိသည်မဟုတ်လော တလျှောက်နောက်ကိုလိုက်မယ့်အပြည့်အဝလည်ပတ်ရုံးတင်စစ်ဆေး Download: www.redgiant.com/products/vfx-suite/free-trial-download/.
အခမဲ့အစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်အတူ Started Get
အနီရောင်ဧရာ VFX အနုပညာရှင်တွေကမ်းလှမ်း 75 အခမဲ့အစိမ်းရောင် screen ကိုကလစ်များ စတင်ရန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် VFX ရိုက်ချက်များအတွက်သုံးစွဲဖို့။ ဗြိတိန်ရဲ့လွတ်လပ်သောဒရာမာကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန့်အနုပညာရှင်တွေ featuring, ထိုရိုက်ချက်များမှာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပဲစင်းငုံမှယခုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် bit.ly/RG-Warriors.
အဆိုပါအပြီးအစီးအနီရောင်ဧရာ Toolset အနိုင်ရ
အနီရောင်ဧရာမိမိတို့၏အနီရောင်ဧရာအစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်တွစ်တာပြိုင်ပွဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှစ်ခုအပိုဆောင်းဆုရရှိသူမှတစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်း Grand Prize ဆုရှင်မှသူတို့လုပ်ရှိသမျှကို tools တွေကိုပယ်သွားပေးခြင်းနှင့်တစ်ခုတည်း suite ကိုခံရလိမ့်မည်။ ဒီနေရာတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
Twitter ပေါ်တွင်အနီရောင်ဧရာ Follow @RedGiantNews
အဆိုပါ hashtag နှင့်အတူတွစ်တာမှသင်၏ video entry ကိုတင်ရန် #RGGreenScreen
သင့်ရဲ့ entry ကိုအတွက်အနီရောင်ဧရာရိုက်ကူးသုံးပါ (အဓိကအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး)
သင့်ရဲ့ entry ကို၌ဤ blog post မှလင့်ခ်များပါဝင်သည် (redgiant.com/RGgreenscreen)
ပြိုင်ပွဲ 10AM PDT ရန်ကုန်မှာ 8 / 2019 / 10 ပြီးဆုံး
အားလုံး Entries တွေကို၌ရှိကြ၏ပြီးတာနဲ့ဧဒုံဧရာအဖွဲ့က Grand Prize ဘို့မိမိတို့အနှစ်သက်ဆုံးကောက်ပါလိမ့်မယ်။ နှစျဦးအပိုဆောင်း entries တွေကိုသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုတည်း suite ကိုအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဆုရရှိသူလုံးဝရှုပ်ထွေးတရား algorithms များဆက်တိုက်ပေါ်အခြေခံပြီးရွေးကောက်တော်မူခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေနေအေးမြ / ရယ်စရာ / မော်ကွန်း / ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံသမျှတရားသူကြီးတွေထင်လိမ့်မည်။
Trapcode အထူး: အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်အော်ဂဲနစ် 3D မှုန်သက်ရောက်မှု, ရှုပ်ထွေးသောရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်နှင့်ပိုပြီးဖန်တီးပါ။ အခုတော့အရည် Dynamics ကိုအတူ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia တည်းဖြတ်ခြင်း Thrones ၏ဂိမ်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor အနီရောင်ဧရာ SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် VFX ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-10-02
ယခင်: Hitachi Kokusai နယူးကင်မရာစနစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အသံလွှင့်-Class 1080p သိမ်းယူမှုပိုမိုသက်သာကို